Xisbullaah: Daacish iyo Alqaacidda waa halis heysata aduunka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa shiicada ee Xisbullah Xasan Nasrallah ayaa sheegay in adduunyadu ay wajahayso khatar aan hore loo arag xagga taariikhda oo ka imaanaysa Daacish iyo ururrada ku xiran Al-Qaacidda.
Waxay ciidankiisa taageero siinayaan madaxweyne Bashar Al Asad, isagoo sii adkeeyey in Xisbullahi diyaar u tahay iney ka dagaallanto dhamaan dalka Suuriya.
Wadaadkan hogaamiya Xisbullah ayaa tilmaamay in dagaalka ay ciidankiisu ka wadaan gobolka Qalmuun ee dhaca soohdinta Suuriya iyo Lubnaan uu sii socon doono ilaa gobolkaas laga dhigo mid ammaan ah.
Gobolka Qalmuun oo ah buurraley ayaa milateriga Suuriya oo taageero ka helaya Xisbullahi guulo ka gaaray dagaalka uu kula jiray Jabhadda ku xiran Alqaacidda ee Alnusrah.